फैक्टरी-शेन्ज़ेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेडको बारेमा
होम>सोधिने प्रश्न>कारखानाको बारेमा
के तपाईं आफैं उत्पादन निर्माण गर्नुहुन्छ?
हो, हामी ourself द्वारा उत्पादन निर्माण। हामी हाम्रो आफ्नै आर एन्ड डी टीम र कारखाना छ, हामी सबै डिजाइन र उत्पादन प्रक्रियाहरु लाई आफैं नियन्त्रण गर्छौं, त्यसैले मात्र हामीलाई सोधपुछ पठाउनुहोस्, र हामी तपाइँको लागी सबै भन्दा राम्रो गर्नेछौं।
के तपाईसँग पेटेन्ट छ?
हो, हामी हाम्रो सबै उत्पादनमा पेटन्टको स्वामित्व राख्छौं, त्यसैले चिन्ता नलिनुहोस्, यदि तपाईंले हाम्रो उत्पादन बेच्नुभयो भने तपाईंले कुनै पनि प्याटेन्टहरू उल्ल .्घन गर्नुहुने छैन।
तपाईंसँग के परीक्षण प्रमाणपत्रहरू छन्?
हामीसँग ISO9001 、 FCC 、 PSE 、 CE 、 RoHS प्रमाणपत्रहरू छन्, हामी तपाईंलाई आवश्यक भएमा अरू कुनै पनि टेस्टि make बनाउन मद्दत गर्दछौं।
तपाईसँग कस्तो प्रमाणपत्र छ?
अहिलेको लागि हामीसँग ISO9001-2015, सीई, RoHS, FCC, PSE प्रमाणपत्रहरू छन्, र हामी तपाईंलाई आवश्यक भएमा अन्य कुनै प्रमाणपत्र वा परीक्षण गर्न पनि मद्दत गर्दछौं।
म पहिलो पटक तपाईंको कम्पनीमा किनमेल गर्दैछु, म कसरी तपाईंमा विश्वास गर्न सक्छु?
हामी पूर्ण रूपमा बुझ्दछौं यदि तपाईंलाई हाम्रो पहिलो सहयोगमा हामीलाई श doubts्का लाग्यो भने। तपाईं हाम्रो कम्पनी वा हाम्रो कारखाना तपाईंलाई मनपर्ने पनी भ्रमण गर्न स्वागत छ। तपाइँ तपाइँको अर्डर को लागी पेपैल (छिटो, सुरक्षित भुक्तानी) लाई पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
म केहि उत्पादहरु खोज्दैछु जुन तपाईको वेबसाइटमा देखाईएको छैन, के तपाई मलाई विशेष अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ?
हामीबीचको हाम्रो सहयोगलाई हामी मूल्यवान् तुल्याउँछौं। त्यसोभए, यदि तपाईं हामीलाई आवश्यक उत्पादनहरूको तस्वीर देखाउन सक्नुहुनेछ भने, हाम्रो कुशल सहकर्मीहरू तपाईंको अर्डरसँग डिल गर्न वसन्त हुनेछन्। हाम्रो कारखाना तपाईंको विशेष अर्डर को लागी गति दिनेछ।